भीड जम्मा गर्नकै लागि एमाले र कांग्रेसको महाधिवेशन : प्रचण्ड « News24 : Premium News Channel
भीड जम्मा गर्नकै लागि एमाले र कांग्रेसको महाधिवेशन : प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समापन भएको नेकपा एमाले र जारी नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन विचार र सिद्धान्तमा केन्द्रित नभई भीड जम्मा गर्नकै लागि गरिएको बताएका छन् ।
‘कमरेड नाराणकाजीजीले भन्नुभएको कुरा ठीकै हो, भीडका लागि महाधिवेशन गरिएको छ । एमालेको महाधिवेशनमा पनि देख्यौँ । कांग्रेसको अधिवेशन पनि चलिरहेको छ । एमालेलाई त म पञ्च र्यालीभन्दा केही देख्दै देख्दिन । निभ्ने बेलाको बत्तीजस्तोमात्र हो त्यो । न त्यहाँ कुनै विचा, बहस, न कुनै विधि, न कुनै पद्धति, निरंकुशताको रुपमा गयो,’ उनले भने, ‘दुनियाँले देख्यौँ । तपाई हामी सबैले देख्यौँ नि, त्यहाँ कुनै प्रस्ताव माथि छलफल भयो ? कुनै विचारमा बहस भयो ? त्यहाँ माक्र्सवादको म पनि उच्चारण गरियो नेतृत्वबाट कहीँ ? समाजवादको कुरा गरियो भन्दा कहीँ केही छैन । त्यहाँ व्यक्ति पूजाको कुरा गरियो । व्यक्तिको अन्धताको प्रचार गरियो । र सिद्धान्तहीनताको प्रदर्शन गरियो ।’
उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस पनि हामी हेरिरहेका छौँ । उहाँहरुको त झन् विचार, सिद्धान्त, सम्मेलन भनेको हिजो उद्घाटन भयो, आज नोमिनेसन हुन्छ, भोलि फिर्ता लिने गर्ने हुन्छ । पर्सि चुनाव हुन्छ सिद्धियो । त्यहाँ राष्ट्र कस्तो बनाउने ? कसरी लैजाने ? हाम्रो संविधानले भनेको समाजवादउन्मुख राज्य कसरी बनाउने होला भन्नेतिर बहस छैन ।’